I-Metal Tin Can Packaging Box Factory, Umkhiqizi e China
IsiQinisekiso Sebhokisi Lensimbi Esiyizingcweti
Njengoba itini lensimbi lobuchwepheshe lingasebenza efektri eChina, i-Yicheng inikeza izinhlobo eziningi zeziqukathi zetini zokudla, ithoyizi, izipho nokufakwa kwezimonyo.
Mayelana NATHIIsikhungo seMikhiqizo
Isitolo esidayisa yonke impahla Tin Ibhokisi Yokupakisha Yebhokisi Lensimbi - YiCheng Group!
I-Yicheng iyi-tin yensimbi esebenzayo ekwazi ukufaka ifektri yamabhokisi efektri, umenzi nomphakeli e-China, sinikeza izinhlobo eziningi zeziqukathi zensimbi zensimbi ezithengiswayo nezithengiswayo.
Yonke imikhiqizo yamabhokisi we-tin evela kuYicheng yayidlulile ukuhlola kwe-grade-grade (LFGB, SGS, EN71, AQL 2.5-4.0 Standard).
Isampuli yesiqobelo se-tin yokufaka yamahhala siyasekelwa.
Iwaranti yeminyaka enguhhafu, uma i-tin yethu ingakwazi ukukhiqiza imikhiqizo ngokushesha, i-Yicheng izolawula insizakalo.
Okuningi Ngamaqembu we-Yicheng
I-Tin Yethu Ingafektha
Sikhiqiza ukupakisha okusha, okudala nokuwina imiklomelo - kepha okubaluleke kakhulu, ukuletha ngesikhathi kanye namazinga aphezulu kakhulu. Siyathanda ukuthatha izinselelo ezintsha ukuze sihlole isipiliyoni sethu nobuchwepheshe bezobuchwepheshe, ukuze sikwazi ukuhlala phambili embonini.
Inkampani yethu ye-Tin Can
Wonke amakhasimende ethu ajabulela insizakalo esheshayo, ephendulayo, enemikhiqizo ye-bespoke ekhiqizwa ukufeza izidingo zomuntu ngamunye nezinhlelo zephrojekthi. Ukuvumelana nezimo kwethu kusivumela ukunikela ngamanani aphansi aphansi ukuqala ngamathani angama-5,000 nje.
Ithimba le-Tin Box Wholesale
Siphakela uhla olubanzi lwazo zombili amathini ezintsha nezendabuko ezisetshenziselwa izinhlobonhlobo zezicelo ezahlukahlukene zokudayisa kufaka phakathi amathini wamabhisikidi, amathini wetiye nekhofi, amathini e-confectionery, ividiyo, amathini we-dvd & multimedia, amathoyilethi namathini esipho.
Isigaba Sethu Semikhiqizo Ye-Tin Box
Isipho sebhokisi lesipho
Ibhokisi lasemini le-tin
Ukukhishwa kosuku olulandelayo emhlabeni wonke
Ngomklamo wakho oyingqayizivele
BHEKA KU-TEAM Yethu